Famonoana an'i Gabriel Fernandez - Wikipedia
Famonoana an'i Gabriel Fernandez
Anarana : Gabriel Fernandez
Teraka : 20 Febroay 2005
Maty: 24 Mey 2018 (13 taona)
Gabriel Daniel Fernandez (20 Febroary 2005 - 24 Mey 2018) dia zazalahy telo ambin'ny folo taona avy any Palmdale, Kalifornia izay nampijaliana sy nampijaliana nandritra ny volana maromaro izay niafara tamin'ny daroka nahafaty azy tamin'ny 22 Mey 2018, izay nitarika ny fahafatesany roa andro taty aoriana. Ny reniny, Pearl Fernandez, sy ny sipany, Isauro Aguirre, dia samy voampanga sy voaheloka ho vono olona tamin'ny ambaratonga voalohany tamin'ny toe-javatra manokana nampijaliana. Voaheloka higadra mandra-pahafatiny i Pearl Fernandez nefa tsy nahazo fahafahana vonjimaika ary voaheloka ho faty i Isauro Aguirre.
Nandritra ny fito ambin'ny folo volana nipetrahan'i Fernandez niaraka tamin'ny reniny sy Aguirre, olona marobe no nitatitra famantarana fanararaotana tamin'ny mpiasa sosialy niaraka tamin'ny Departemantan'ny Ankizy sy ny Fianakaviana Los Angeles County ary ny Departemantan'ny Sheriff County Los Angeles. Tsy nesorina tao an-trano mihitsy anefa i Fernandez. Niteraka ahiahy maro momba ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny tolotra ara-tsosialy ao amin'ny Fivondronan'i Los Angeles izany, ary tamin'ny farany dia nitarika mpiasa sosialy efatra voampanga ho heloka bevava tao amin'ny Fitsarana Ambony Los Angeles.
Gabriel Daniel Fernandez dia teraka tamin'ny 20 Febroary 2005 tamin'i Arnold Contreras sy Pearl Fernandez. Fotoana fohy taorian'ny nahaterahany, i Gabriel dia napetraka teo am-pelatanan'ny dadatoany eo amin'ny renin-dreniny, Michael Lemos Carranza, sy David Martinez mpiara-miasa aminy. Nanohy nitaiza an’i Fernandez nandritra ny efa-taona izy ireo. Tamin'ny taona 2009, nifindra niaraka tamin'ny raibe sy renibeny i Gabriel, efa-taona, noho ny fanoheran'ny raibeny ny fifandraisan'i Carranza sy Martinez mitovy fananahana. Niara-nipetraka tamin'ny raibe sy renibeny izy hatramin'ny 2012, rehefa nahazo ny fitandremana ara-batana azy indray ny reniny, Pearl Fernandez, sy Isauro Aguirre, sipany.
na eo aza ny ahiahy momba ny fiahiany nambaran’ny fianakaviany.
Fanararaotana sy famonoanaHanova
Nandritra ny fito ambin'ny folo volana nijanonany tao an-tranon'i Pearl Fernandez sy Isauro Aguirre, Gabriel Fernandez dia nampijaliana sy nampijaliana. Ny fanararaotana dia ny kapoka ara-batana tsy tapaka izay niteraka vaky taolana, voatery nihinana fako sy diky, ny loany, ary ny sakafo simba na lany andro, nodorana tamin'ny sigara sy zava-mahadomelina, ny efitra fandroana ho an'ny zazavavy nosamborina adala, voatifitra teo amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana. , anisan’izany ny tarehiny sy ny valahany, miaraka amin’ny basy BB, voafafy sakay, noterena hanao fitafian-behivavy, hatory voafatotra sy voahidy ao anaty vata kely, voadona amin’ny ramanavy ny nifiny, ary nandro tamin’ny ranomandry. . Araka ny filazan'ireo iray tampo amin'i Fernandez, raha iharan'ny herisetra i Fernandez dia nihomehy ny reniny sy ny raikeliny. Araka ny filazan'ny mpampanoa lalàna, voalaza fa nanosika an'i Fernandez i Aguirre satria nino izy fa pelaka. Tsy niitatra tamin’ny iray tampo amin’i Fernandez ny fanararaotana sy fampijaliana.
Tamin'ny 22 May 2018, niantso 9-1-1 i Pearl Fernandez nilaza fa tsy miaina ny zanany, Gabriel Fernandez. Nokapohin'ny reniny sy Aguirre i Fernandez rehefa tsy nahavita nanadio ny kilalaony. Rehefa tonga ny mpamaly voalohany dia hitany teo amin'ny tany niboridana ary naratra maromaro. Nohazavain'i Aguirre tamin'izy ireo fa "pelaka" i Fernandez, na dia tsy misy dikany aza ny vaovao, dia nentin'ny Paramedics haingana tany amin'ny hopitaly izy ary nambaran'ny dokotera fa maty ny atidohany. Nodimandry efatra ambin'ny folo andro taty aoriana izy ny 24 Mey 2018 tao amin'ny Hopitaly Ankizy Los Angeles. Telo ambin'ny folo taona izy no maty, ary ny autopsie ofisialy dia nanambara fa noho ny ratram-po mahery vaika nifanindry tamin'ny tsy firaharahiana sy ny tsy fanjarian-tsakafo no nahafaty azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famonoana_an%27i_Gabriel_Fernandez&oldid=1042488"
Dernière modification le 25 Desambra 2021, à 19:55
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2021 amin'ny 19:55 ity pejy ity.